အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ Sea games ရွှေ့ဆိုင်းရန် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အဆိုပြု - Xinhua News Agency
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အရှေ့တောင်အာရှ(SEA)အားကစားပြိုင်ပွဲအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးကစားသမားများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဟနွိုင်း ၊ ဇွန် ၁၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
COVID-19 ရောဂါစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့် နိုဝင်ဘာလ နှင့် ဒီဇင်ဘာလတို့တွင် ကျင်းပရန် သတ်မှတ်ထားသော ၃၁ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ(ဆီးဂိမ်းစ်) အားကစားပြိုင်ပွဲများကို လာမည့်နှစ် ဇူလိုင်လသို့ ရွှေ့ဆိုင်းရန် ဗီယက်နမ်အိုလံပစ်ကော်မတီက အဆိုပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဗီယက်နမ်အိုလံပစ်ကော်မတီက ယင်းအကြံပြုချက်အား ဇွန် ၉ ရက်တွင် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားအဖွဲ့ချုပ် ညှိနှိုင်းရေးရုံး နှင့် ဒေသတွင်း အိုလံပစ်ကော်မတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသတွင်း Vietnam News မီဒီယာက ဇွန် ၁၀ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပြုချက်အရ အိမ်ရှင်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် အခြားဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့်နိုင်ငံများတွင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုများ တကျော့ပြန် ဖြစ်ပွားနေရာ နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပသည့် ဒေသတွင်း အားကစားပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ရန် အားကစားသမားများ နှင့် နည်းပြများအတွက်ပါ အခက်အခဲများရှိနေကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားချိန်တွင် အားကစားပြိုင်ပွဲများကို မည်ကဲ့သို့ ကျင်းပရမည်ကို လေ့လာလိုကြောင်း ၊ အထူးသဖြင့် ယခုနှစ် နွေရာသီအတွက် စီစဉ်ထားသော တိုကျိုအိုလံပစ် အားကစားပြိုင်ပွဲများကို ဥပမာပေး၍ ရည်ညွှန်းခဲ့ကြောင်း အဆိုပြုချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံများအနေဖြင့်လည်း အဆိုပြုချက်အား ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်ကာ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများက အရှေ့တောင်အာရှ(SEA)အားကစားပြိုင်ပွဲများ မည်ကဲ့သို့ ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည် ဆိုသည့်အပေါ် ဆုံးဖြတ်ရန် နောက်ပိုင်းတွင် အစည်းအဝေးတစ်ရပ် ထပ်မံ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း Vietnam News တွင် ဖော်ပြထားသည်။အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားကောင်စီက ချမှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအဆိုပြုချက်သည် အတည်ဖြစ်သွားပါက ပထမဆုံးအကြိမ် အရှေ့တောင်အာရှ(ဆီးဂိမ်းစ်)အားကစားပြိုင်ပွဲအား ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း ဖြစ်လာမည်ဟု သိရသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၌ ဧပြီလနှောင်းပိုင်း နောက်ဆုံး COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု စတင်ချိန်မှစ၍ ဇွန် ၁၀ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီအထိ ပြည်တွင်းကူးစက်သူပေါင်း ၆,၄၅၀ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Bac Ninh နှင့် Bac Giang ပြည်နယ်များအပါအဝင် ကပ်ရောဂါ အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဒေသများထဲတွင် ပွဲစဉ်ကျင်းပမည့် ပြည်နယ်အချို့ ပါဝင်နေပြီး အရေးပေါ် COVID-19 လူနာကုသပေးရန်အတွက် Bac Giang ပြည်နယ်ရှိ ကြက်တောင်ရိုက် အားကစားရုံကိုလည်း ဆေးရုံအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
HANOI, June 10 (Xinhua) — The Vietnam Olympic Committee has proposed postponing the 31st Southeast Asian (SEA) Games, which is slated to be held in November and December, to July next year due to COVID-19 concerns.
1.Players of Thailand celebrate after the women’s floorball preliminary round match against Indonesia at the SEA Games 2019 in Quezon City, the Philippines, Nov. 28, 2019. (Xinhua/Rouelle Umali)